Aqoonsigeenna Rasmiga ah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Maalmahan dambe badanaa waa kiiska inaad magac u samaysato naftaada si aad muhiim ugu tahay dadka kale iyo naftaada. Waxay umuuqataa in dadku ay ku jiraan raadis aan la qiyaasi karin oo ku saabsan aqoonsiga iyo macnaha. Laakiin Ciise mar hore ayuu yiri: "Ku alla kii naftiisa helaa waa lumin doonaa; Kan naftiisa u lumiya aawaday waa heli doonaa. (Matayos 10:39). Kaniisad ahaan, waxaan ka baranay runtaan. Laga soo bilaabo 2009 waxaa naloogu yeeraa "Grace Communion International" oo magacani wuxuu tixraacayaa aqoonsigeenna runta ah, kaasoo ku saleysan Ciise oo aan annaga ku jirin. Aynu si dhow u eegno magacan oo aan ogaano waxa ku dhex qarsoon.
Nimco waa ereyga ugu horreeya magaceena maxaa yeelay waxay si fiican u qeexeysaa shaqsigeenna iyo safarka aan isla wadaagno ee xagga Ciise Masiix xagga Ruuxa Quduuska ah. "Hase yeeshe, waxaan aaminsanahay inay ku badbaadi doonaan nimcada Rabbi Ciise iyo sidoo kaleba" (Falimaha 15, 11). Waxaynu nahay "xaq uma lihin nimcadiisa nimcadiisa xagga madax furashada xagga Ciise Masiix" (Rooma 3:24). Nimco ayaa Ilaah inaga tegayaa (Masiixa ku dhex Wadaaga) qaybtiisa xaqnimadiisa. Baybalku wuxuu had iyo jeer ina barayaa in fariinta iimaanka ay tahay farriin ku saabsan nimcada Ilaah (eeg Falimaha Rasuullada 14: 3; 20, 24; 20, 32).
Asalka cilaaqaadka uu Eebbe la leeyahay dadka wuxuu had iyo goor ahaa nimco iyo run. In kasta oo sharcigu ahaa muujinta qiyamkan, nimcada Ilaah lafteeda ayaa heshay muujinta buuxda xagga Ciise Masiix. Nimcada Ilaah waxaa ina badbaadiya oo keliya Ciise Masiix ee ma aha inaan sharciga ilaalinno. Sharciga qof walbaa lagu xukumo ma ahan erayga ugu dambeeya ee Eebbe inagu dhawaaqo. Ereygiisa ugu dambeeya ee annaga waa Ciise. Waa muujinta qumman ee shakhsi ahaaneed ee nimcada Ilaah iyo runta uu isagu si xor ah u siiyay aadanaha.
Xukunkayagu sharciga hoos ku yaal waa mid cadaalad ah oo caddaalad ah. Annagu nafteenna kama helno dhaqan sharci ah maxaa yeelay Ilaahay ma aha maxbuus ee sharcigiisa iyo sharciyadiisa. Ilaah inagu dhex shaqeeyaa xorriyadda rabbaaniga ah ee raacaysa doonistiisa.
Doonistiisa waxaa lagu qeexay nimco iyo madax furasho. Rasuul Bawlos wuxuu soo qoray waxyaabaha soo socda: “Ma tuurayo nimcada Ilaah; maxaa yeelay, haddii xaqnimo sharciga laga helo, Masiix micnela'aan buu u dhintay. (Galatiya 2:21). Bawlos wuxuu ku tilmaamay nimcada Ilaah inay tahay tan kaliya ee uusan rabin inuu tuuro. Nimco ma aha wax la miisaami karo oo la cabbiri karo laguna ganacsan karo. Nimco waa wanaagga nololeed ee Eebbe ee uu ku raacdo qalbiga iyo maskaxda aadanaha oo labadoodaba is beddelo.
Waraaq uu u diray kaniisadda Rome, ayuu Bawlos ku qoray in waxa kaliya ee aan iskudayno in aan ku gaarno dadaalkeenna ay tahay bixinta dembiga, oo ah dhimashada lafteeda. Laakiin sidoo kale waxaa jira mid gaar ah oo wanaagsan, maxaa yeelay "hadiyadda Ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo Rabbigeenna Ciise Masiix" (Rooma 6:24). Ciise waa nimcada Ilaah. Waa furashada Ilaah oo loo sii daayay dadka oo dhan.
Wehelnimadu waa erayga labaad ee magacayaga ku jira, maxaa yeelay waxaan xiriir dhab ah la leenahay Aabbaha xagga Wiilka iyadoo lala yeelanayo Ruuxa Quduuska ah. Masiixa dhexdeeda waxaan ku leennahay wehel run ah oo aan la leenahay Ilaah iyo midkeenba midka kale. James Torrance ayaa sidan u dhigay: "Saddexmidnimada Eebbe wuxuu ku abuuraa is wehesho qaab aan annagu nahay dad dhab ah haddii aan helnay aqoonsigeennii iskaashiga isaga iyo dadka kale."
Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ahu waxay leeyihiin wehelnimo kaamil ah oo Ciisena wuxuu ku baryey in xertiisu wadaagaan xiriirkan iyo inay tan ka tarjumaan adduunka (Yooxanaa 14:20; 17, 23). Rasuul Yooxanaa wuxuu ku sharaxay bulshadaan inay jacaylku salka ku hayaan. Yooxanaa wuxuu jacaylkan qotada dheer ku tilmaamay xidhiidhka weligiis ah ee lala yeesho Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Xiriirka dhabta ahi wuxuu ka dhigan yahay ku noolaanshaha wada noolaanshaha Masiixa jacaylka Aabbaha xagga Ruuxa Quduuska ah (1 Yooxanaa 4: 8).
Waxaa had iyo jeer la sheegaa in ahaanshaha Masiixiyiintu tahay xidhiidh shaqsiyeed lala yeesho Ciise. Baybalku wuxuu adeegsanayaa dhowr tusaale oo ku saabsan xiriirkaan. Mid wuxuu ka hadlayaa xiriirka sayidkiisa iyo addoonkiisa. Laga soo bilaabo tan, waxay raacaysaa inaan sharfanno oo raacno Rabbigeenna Ciise Masiix. Ciise wuxuu xertiisa sii waday: «Hadda ka dib ku odhan maayo inaad addoommo tihiin; maxaa yeelay, addoonku garan maayo wuxuu sayidkiisu sameeyo. Laakiin waxaan kuu sheegay inaad saaxiibo tihiin; maxaa yeelay wixii aan aabbahay ka maqlay oo dhan waan idin ogeysiiyey » (Yooxanaa 15:15). Sawir kale wuxuu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeeya aabaha iyo carruurtiisa (Yooxanaa 1: 12-13). Ciise xitaa wuxuu isticmaalaa sawirka aroosadda iyo aroosadiisa, kuwaa oo horey looga heli karay Axdiga Hore (Matayos 9:15) iyo Bawlos waxay wax ka qoreen xiriirka ka dhexeeya ninka iyo afada (Efesos 5). Xarafka Cibraaniyada xitaa wuxuu leeyahay annaga oo Masiixiyiin ah waxaan nahay walaalo Ciise ah (Cibraaniyada 2: 11). Dhamaan sawiradan (Addoon, saaxiib, cunug, sayga, walaasha, walaalkii) waxay wataan fikirka qoto dheer, mid wanaagsan, iyo wada shaqeynta bulshada. Laakiin kuwan oo dhami waa sawirro uun. Saddex-geesnimadeenna Eebbe ayaa ah isha iyo runta xiriirkan iyo bulshadaan. Waa beel uu si deeqsinimo leh nagula wadaago naxariistiisa.
Ciise wuxuu ku baryay in aynu isaga weligiis la joogno oo aan ku faraxno wanaagan (Yooxanaa 17:24). Tukashadani wuxuu nagu casuumay inaan kuwada noolaano qayb ka mid ah bulshada midba midka kale iyo aabaha. Markuu Ciise jannada kor u qaaday, wuxuu ina qaatay asxaabtiisii, oo wuxuu ku dhex qaatay degmada Aabbaha iyo Ruuxa Quduuska ah. Bawlos wuxuu leeyahay waa jid loo maro Ruuxa Quduuska ah oo aan ku dhex fadhiisanno Masiixa iyo joogitaanka Aabbaha (Efesos 2, 6). Waxaan horeyba u arki karnaa xiriirkan aan Ilaah la leenahay, xitaa haddii dhammaystirka xiriirkan la arki karo oo keliya marka Masiixu soo laabto oo uu aasaaso xukunkiisa. Taasi waa sababta ay beeshu qayb muhiim ah uga tahay beesheena caqiidada. Aqoonsigeenna, hadda iyo weligiisba, wuxuu ku aasaasnaa Masiixa iyo bulshada uu Eebbe wadaagayo sida Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah.
Caalami ahaan waa erayga seddexaad ee magaceenna lagu helo maxaa yeelay kaniisaddeenu waa beel aad u caalami ah. Waxaan dadka kula xiriirnaa dhaqammo kala duwan, luqado iyo xuduudo kaladuwan - waxaan gaarno dadka adduunka oo dhan. In kasta oo aan tirakoob ahaan ahaan u nahay bulsho yar, haddana waxaa jira bulsho ku nool gobol kasta oo Mareykan ah iyo sidoo kale Kanada, Mexico, Caribbean, South America, Europe, Aasiya, Australia, Afrika iyo Jasiiradaha Badweynta. Waxaan leenahay in kabadan 50.000 xubnood in kabadan 70 wadan oo guryo kaheley in kabadan 900 oo jameeco.
Eebbe wuxuu ina keenay innaguna bulshadaan caalamiga ah. Waa wax fiican in anaga wey weyntahay in aan wada shaqeyno hadana hadana in yar oo yar in shaqadan wadajirka ah ay wali shaqsiyan yihiin. Bulshadeena dhexdeeda, saaxiibtinimo ayaa had iyo jeer lagu dhisaa laguna beero dhammaan xuduudaha qaran iyo dhaqan, kuwaas oo maanta badiyaa wadaagaan adduunkeena. Runtii waa calaamad nimcada Eebbe!
Kaniisad ahaan, waxaa muhiim noo ah inaan ku noolaano oo aan wadaagno injiilka Ilaah geliyay qalbiyadeenna. Xitaa la soo noqoshada hodanka nimcada Ilaah iyo jacaylku waxay nagu kallifaysaa inaan dadka injiilka la wadaagno. Waxaan rabnaa in dadka kale ay galaan oo ay ilaashadaan cilaaqaadka ay la leeyihiin Ciise Masiix oo aan kula wadaagno farxaddan. Ma qarin karno injiilka maxaa yeelay waxaan rabnaa in dadka aduunka oo dhami ay dareemaan nimcada ilaahay oo ay ka mid noqdaan bulshada sadex geesoodka ah. Taasi waa farriinta uu Eebbe ina siiyay si aan ula wadaagno adduunka.